ထွက်မြောက်ရာ 35 (သမ္မာကျမ်း၊၊ Judson (1835))České uživatelské rozhraní
1 မောရှေသည်မောရှေသည်၊ ဣသရေလအမျိုးပရိသတ်အပေါင်းကကို စည်းဝေးစေ၍၊ ထာဝရဘုရားဘုရား မိန့်တော်မူသော သင်တို့ကကျင့်ဝတ်တရားဟူမူကကား၊
2 ခြောက်ခြောက်ရက်ပတ်လုံး အလုပ်အလုပ်လုပ်ရမည်။ သတ္တမနေ့နေ့ရက်သည် သင်တို့၌ သန့်ရှင်းသောနေ့နေ့၊ ထာဝရဘုရားဘုရားအဘို့ ငြိမ်ဝပ်စွာ နေရသော ဥပုသ်နေ့ဥပုသ်နေ့ဖြစ်၏။ ထိုနေ့နေ့၌ အလုပ်အလုပ်လုပ်သော သူမည်သည်ကား အသေခံရမည်။
3 သင်တို့နေရာနေရာအရပ်၌ ဥပုသ်နေ့ဥပုသ်နေ့မှာ မီးမီးကို မမွေးရဟု ဆင့်ဆို၏။။
4 တဖန် မောရှေသည်မောရှေသည်၊ ဣသရေလအမျိုးသားသားပရိသတ်အလယ်၌ ထာဝရဘုရားဘုရား၏အမိန့်တော်ကကို ဆင့်ဆိုသည်ကကား၊
5 သင်တို့တွင် ထာဝရဘုရားဘုရားအား လှူသော အလှူကို ပြင်ဆင်ကြလော့။ ကြည်ညိုသော စေတနာစိတ် ရှိသမျှသော သူတို့သည်၊ ရွှေရွှေ၊ ငွေငွေ၊ ကြေးဝါကြေးဝါ၊
6 ပြာသော အထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောပိတ်ချော၊ ဆိတ်ဆိတ်မွေး၊
7 အနီဆုံးသောသိုးရေသိုးရေ၊ တဟာရှသားရေသားရေ၊ အကာရှသစ်သားသစ်သား၊
8 လိမ်းရန် ဆီဆီဘော်ဘို့၊ မီးရှို့ရာနံ့သာပေါင်း မွှေးမွှေးဘော်ဘို့ရာ နံ့သာမျိုးနံ့သာမျိုး၊ မီးထွန်းစရာဆီဆီ၊
9 ရဟံကျောက်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်သင်တိုင်းနှင့် ရင်ဖွဲ့၌ စီစရာကျောက်မြတ်တည်းဟူသော ထာဝရဘုရား အား လှူသောအလှူကို ဆောင်ခဲ့ကြလော့။
10 သင်တို့တွင် လိမ္မာသော သူရှိသမျှတို့သည်လာလာ၍၊
11 တဲတဲတော်နှင့်အပေါ်တဲတဲ၊ အပေါ်တဲတဲအဖုံး၊ ရွှေချောင်း၊ ပျဉ်ပြားပျဉ်ပြား၊ ကန့်လန့်ကျင်၊ တိုင်တိုင်၊ ခြေစွပ်တို့ကို၎င်း၊
12 သေတ္တာသေတ္တာနှင့် သူ၏ထမ်းဘိုး၊ သေတ္တာသေတ္တာအဖုံး၊ ကာရသော ကုလားကာကို၎င်း၊
13 စားပွဲစားပွဲနှင့် သူ၏ထမင်းဘိုး၊ သူ၏တန်ဆာရှိသမျှနှင့် ရှေ့တော်မုန့်ကို၎င်း၊
14 မီးထွန်းစရာဘို့ မီးခုံမီးခုံနှင့် သူ၏တန်ဆာ၊ မီးခွက်မီးခွက်များ၊ မီးထွန်းစရာဆီဆီကို၎င်း၊
15 နံ့သာပေါင်းရှို့သော ပလ္လင်နှင့် သူ၏ထမ်းဘိုး၊ လိမ်းရန်ဆီဆီ၊ မွှေးမွှေးသော နံ့သာပေါင်း၊ တဲတော်တံခါးဝ ကာရန် ကုလားကာကို၎င်း၊
16 မီးရှို့ရာယဇ်ပူဇော်သော ပလ္လင်နှင့် ကြေးဝါကြေးဝါဆန်ခါ၊ ထမ်းဘိုး၊ တန်ဆာရှိသမျှ၊ အင်တုံနှင့် ခြေထောက်ကို၎င်း၊
17 တဲတော်ဝင်းကုလားကာ၊ တိုင်တိုင်၊ ခြေစွပ်၊ ဝင်းတံခါးဝကာစရာ ကုလားကာကို၎င်း၊
18 တဲတော်တံသင်တံသင်၊ ဝင်းတံသင်တံသင် ကြိုးများကို၎င်း၊
19 သန့်ရှင်းရာဌာန၌ အမှုတော်ကို ထမ်းစရာအဝတ်အဝတ် ယဇ်ပုရောဟိတ်ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို ဆောင်သောအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်ယဇ်ပုရောဟိတ်အာရုန်နျင့် သူ၏သားသား ဝတ်၍ သန့်ရှင်းသော အဝတ်အဝတ်ကို၎င်း၊ ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသမျှ အတိုင်း လုပ်ရကြမည်ဟု ဆင့်ဆို၏။
20 ဣသရေလအမျိုးသားသားပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်၊ မောရှေထံမှ ထွက်သွားကြ၍၊
21 မိမိစိတ်နှလုံးနှလုံးနှိုးဆော်သောသူ၊ ကြည်ညိုသောစေတနာစိတ်သဘောရှိသော သူအပေါင်းတို့သည် ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတဲတော်လုပ်ဘို့၎င်း၊ အမှုတော်ထမ်းစရာဘို့၎င်း၊ သန့်ရှင်းသောအဝတ်အဝတ်ကို၎င်း၊ ထာဝရဘုရားဘုရားအား လှူသောအလှူကို ဆော်လျက် လာလာကြ၏။
22 ကြည်ညိုသော စေတနာစိတ်ရှိသော ယောက်ျားမိန်းမမိန်းမတို့သည်၊ လက်ကောက်၊ နားတောင်း၊ လက်စွပ်လက်စွပ်၊ နှာခေါင်းဘူး၊ ရွှေတန်ဆာရှိသမျှကို ဆောင်ခဲ့သဖြင့်၊ လှူသောသူ အသီးအသီးတို့သည်၊ ထာဝရဘုရားဘုရားအား ရွှေကို လှူကြ၏။
23 ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောပိတ်ချော၊ ဆိတ်ဆိတ်မွေး၊ အနီဆိုးသောသိုးရေသိုးရေ၊ တဟာရှသားရေသားရေရှိသော သူတိုင်းဆောင်ခဲ့၏။
24 ငွေငွေနှင့် ကြေးဝါကြေးဝါကို လှူသောသူတိုင်း ထာဝရဘုရားဘုရားအား လှူလေ၏။ အမှုတော်နှင့်ယှဉ်သော အလုပ်အလုပ်လုပ်စရာဘို့ အကာရှသစ်သားသစ်သားရှိသော သူတိုင်းလည်း ဆောင်ခဲ့လေ၏။
25 ရက်ကန်းတတ်သော မိန်းမမိန်းမအပေါင်းတို့လည်း၊ ကိုယ်လက်လက်နှင့်ရက်၍၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောပိတ်ချောရက်သမျှကို ဆောင်ခဲ့ကြ၏။
26 မိမိဥာဏ်နှိုးဆော်သော မိန်းမမိန်းမအပေါင်းတို့သည် ဆိတ်ဆိတ်မွေးကို ရက်ကြ၏။
27 သူကြီးတို့သည်လည်း၊ ရှဟံကျောက်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်သင်တိုင်းနှင့် ရင်ဖွဲ့၌ စီစရာကျောက်ကို၎င်း၊
28 မီးထွန်းစရာဘို့ လိမ်းရန် ဆီဆီဘော်ဘို့ မီးရှို့ရာ နံ့သာပေါင်းမွှေးမွှေးဘော်ဘို့ရာ နံ့သာမျိုးနံ့သာမျိုးနှင့် ဆီဆီကို၎င်း ဆောင်ခဲ့ကြ၏။
29 ထိုသို့ ထာဝရဘုရားဘုရားသည် မောရှေအားဖြင့် မှာထားတော်မူသော အလုပ်အလုပ်အမျိုးမျိုးရှိသမျှအဘို့၊ ဣသရေလအမျိုးသားသားတို့တွင် ကကြည်ညိုသော စေတနာစိတ်နှိုးဆော်သော ယောကက်ျားမိန်းမမိန်းမအပေါင်းတို့သည်၊ ထာဝရဘုရားဘုရားအား ကကြည်ညိုသော စိတ်နှင့် လှူကကြ၏။
30 တဖန် မောရှေက၊ နားထောင်ကြလော့။ ထာဝရဘုရားဘုရားသည် ယုဒယုဒအမျိုးသားသားဟုရ၏သားသားဖြစ်သော ဥရိ၏သားသားဗေဇလေလကို အမည်ဖြင့် ခန့်ထားတော်မူပြီ။
31 သူသည် ရွှေငွေကြေးဝါကို လုပ်သောအတတ်။
32 ကျောက်ကို သွေး၍ စီသော အတတ်၊ သစ်သားကို ထုလုပ်သော အတတ်နှင့် အမျိုးမျိုးသောအလုပ်ကို ထူးဆန်းစွာ လုပ်တတ်မည်အကြောင်း၊
33 ဥာဏ်ပညာနှင့်တကွ သိပ္ပံအတတ်အမျိုးမျိုးကို ပေး၍၊ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်စုံစေတော်မူပြီ။
34 သူနှင့် ဒန်ဒန်အမျိုးသားသား အဟိသမက်၏သားသား အဟောလျဘအဟောလျဘသည်၊ သူတပါးအား အတတ်သင်ပေးပေးနိုင် မည်အကြောင်း၊ ဥာဏ်ကို ပေးပေးတော်မူပြီ။
35 ထိုသူတို့သည် ထုလုပ်တတ်သောသူ၏ အလုပ်အလုပ်၊ ဆန်းပြားသောလက်သမားလက်သမား၏ အလုပ်အလုပ်၊ ပြာသော အထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောပိတ်ချောကို ချယ်လှယ်ချယ်လှယ်တတ်သော သူ၏အလုပ်အလုပ်၊ ရက်ရက်တတ်သောသူ၏အလုပ်အလုပ်၊ အနည်းနည်း လုပ်တတ်သောသူ၏အလုပ်အလုပ် အမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့ကို လုပ်တတ်မည် အကြောင်း၊ ဥာဏ်ပညာနှင့် ပြည့်စုံတော်မူပြီ။
Exploring the Meaning of ထွက်မြောက်ရာ 35
Arcana Coelestia 10725. The subject treated of in this chapter in the internal sense is inasummary all the kinds of good and of truth which are in the church and in heaven, and from which is the worship of the Lord. These are the things which are signified by the things the sons of Israel brought willingly to make the Tabernacle with all things therein, also the altar of burnt-offering, and likewise the garments of Aaron and his sons.